6 mamiriro ekunze maapplication kuitira kuti mamiriro ekunze asakubata iwe panzira 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ndiani asina kumbobatwa zvisina kunaka nemamiriro ekunze pakubva pamba asina amburera? Kana kuti wakabuda uchifunga kuti kwaizotonhora ndokuwana zuva rakakura? Neizvi uye zvimwe zvikonzero, kuve nemamiriro ekunze ekufanotaura app kwakakosha kudzivirira zvimwe zviitiko zvisingafanoonekwi. Mushure mezvose, mamiriro ekunze aripo kuti atibatsire.
Nhasi kune akati wandei emamiriro ekunze ekushandisa kunzvenga nguva dzinonyadzisa, senge kunyorovesa kubasa kana kusashama nezuva pazuva repicnic mupaki. Ndosaka SeoGranada yaita iyi runyorwa nezvakanakisa zvemazuva ano. Buda:
AccuWeather ndeimwe yemamiriro ekunze anozivikanwa. Iyo zvakare ndeimwe yeakanyanya kurongeka, ichipa chaiyo-nguva yekunze ruzivo, ine akati wandei maficha maficha
Iyo tekinoroji inoshandiswa neAccuWeather inosimbisa imwe yeakavimbika mamiriro ekunze anowanikwa nhasi. Dutu uye / kana kamwe kamwe shanduko mumamiriro ekunze inoyambirwa kuburikidza neyambiro chaiyo, saka hapana munhu anobatwa nekuchengetedzwa neyakaitika isingatarisirwe mamiriro ekunze.
Pamusoro pekuita kuti zvikwanise kuona fungidziro yanhasi kana mavhiki maviri kubva zvino, AccuWeather inopa ruzivo nezve mhepo, humidity uye mhepo chill.
Kuti utore pasi AccuWeather, sarudza inoshanda sisitimu: Android / iOS.
Astronomy kunyorera kuti uongorore zvakasikwa munguva chaiyo
NaClimatempo unogona kuziva mamiriro ekunze chero kupi. Unogona kutarisa munguva chaiyo, mukuwedzera kuve neawa, zuva nezuva kana rinotevera zuva data.
Kuita kuti zvese zviwedzere kutaridzika, zvinogoneka kutambira nhau dzine chekuita nemamiriro ekunze uye uzive zviri kuitika munyika. ndinoifarira widget kubva kuchishandiso, ingosarudza mhando yezviri mukati uye nekuwana yakananga kubva kumba kana kukiya skrini.
Mune iko kunyorera kune ruzivo nezvekumhanyisa kwemhepo, kuoneka, kumanikidzwa kwemhepo, kubuda kwezuva uye nguva dzekuvira kwezuva, mwando wemhepo, pakati pevamwe. Iyo app ichiri kuteedzera dutu.
Kuti utore Climatempo, sarudza inoshanda sisitimu: Android / iOS.
Imwe yemashandisirwo anonyanya kushandiswa kana zvasvika kune mamiriro ekunze, Yahoo Weather ine inonzwisisika uye inonakidza dhizaini, kuunza akati wandei mafoto anoenderana nenzvimbo, nguva nemamiriro ekunze.
Ruzivo urwu rwunoratidzwa mune yakazara uye yakadzama mishumo, iine muongororwo wemamiriro ekunze kusvika kumazuva gumi anotevera. Pa mepu inofambidzana, unogona kuwana tembiricha munzvimbo dzakasiyana uye nekwiriro nekumhanyisa kwemhepo.
Yambiro yakaipa yemamiriro ekunze inokubatsira kuronga zvirinani zuva rako, pamwe neanonakidza maficha anopa data senge kubuda kwezuva uye kuvira kwezuva uye kumanikidza kwemhepo. Iko kuitika kweiyo ultraviolet (UV) mwaranzi inowanikwawo, pamwe nehunyoro hwemhepo.
Kuti utore Yahoo Tempo, sarudza inoshanda sisitimu: Android / iOS.
4. Mamiriro ekunze uye radar
Nekukurumidza kufungidzira kwemamiriro ekunze, neClima & Radar unogona kudzivirira kudziya kwemaawa makumi maviri nemana anotevera kana mazuva gumi nemana kubva zvino. Uyezve, hongu, mamwe akawanda emamwe ma data ekuchengeta zvese zvichienda sezvakarongwa, pasina kuisa njodzi kunaya kwemvura iko zuva iro mupaki!
Izvo zvichiri kugona kuongorora kumhanya kwemhepo, kuoneka, mukana wemvura, kubuda kwezuva uye nguva dzekuvira kwezuva, kunzwa kwekushisa, pakati pehumwe ruzivo. Kuti uve nedhata rakaringana, unogona kusanganisira chaiko nzvimbo mukushandisa.
Kuti utore Weather & Radar, sarudza inoshanda sisitimu: Android / iOS.
5. Nguva yeBrazil
Imwe yeakanyanya kunakidza mapoinzi eTempo Brasil mukana wekuve nemifananidzo chaiyo inobvumidza kuona mamiriro ekunze nekukurumidza. Nekungogara uchigadzirisa, ruzivo rwese rwunowanikwa zviri nyore pane intuitive interface.
Unogona kutarisa mamiriro ekunze kusvika mazuva gumi pamberi. Zvese mune yakasarudzika mushumo, iyo inosanganisira ruzivo nezve kunaya, mhepo, ultraviolet mwaranzi, yemuchadenga kumanikidza, pakati peimwe yakawanda data.
Yakagadzirirwa nharembozha uye mahwendefa, ine Tempo Brasil iwe unokwanisa kuwana mepu dzinopindirana, zvichiita kuti zvive nyore kuwana nzvimbo chaiyo yenzvimbo yakasarudzwa yechiitiko kana kushanya. Yakanaka kune chero munhu anoda yakapusa asi inoshanda application.
Kuti utore Tempo Brasil, sarudza inoshanda sisitimu: Android / iOS.
Neichi chishandiso, iwe une ruzivo munguva chaiyo, uchigona kubvunza nezvemeteorology mune ingangoitika pasirese. Kubva kuRio de Janeiro kuenda kuLondon, kubva kuNew York kuenda kuTokyo, iwe uri muchidimbu neshanduko diki dzemamiriro ekunze uye unogadzirira zuva risina zviitiko zvisingafanoonekwi.
Pamusoro pe data rekushisa, Weather Forecast inoratidza ruzivo mune yakazara mushumo, mune ese madigiri Celsius neFahrenheit. Unogona kuwana kumanikidzwa kwemuchadenga, kuoneka, hunyoro hwemhepo, kunaya kunzvimbo dzakasiyana pamamepu anofambidzana, kumhanya kwemhepo uye negwara, nezvimwe zvakawanda.
Aihwa widget Iko kune kwakagadziridzwa ruzivo nguva dzese, kuve nekukwanisa kutarisa mamiriro ekunze emazuva anotevera kana vhiki.
Kuti utore mamiriro ekunze, tinya pano.
Nemapurogiramu ari pamusoro, pane huwandu hwakazara hweruzivo nezve mamiriro ekunze uye zvingangoerekana zvachinja zvinogona kukanganisa zvirongwa zvezuva rinoshamisa. Ngwarira kunaya kwemvura kuti urege kubatwa zvisina kufanira!
Iye zvino zvaunenge uine rumwe ruzivo nezve kusanyoroveswa pabasa, ko iwe unoziva sei gumi ekuverengera maapplication uye nekuteedzera kuti ingani nguva yasara kusvika kumuchato kana iro rinoshamisa rwendo?
Kuti tipe kukurudzira kumanzwiro, isu tinoratidza zvakare mashandisirwo emitsara misere yekukurudzira zuva rega rega. Nekudaro, kana kuri kutonaya uye iwe uri munzira kuenda kubasa kana kuyunivhesiti, tine gumi mafomu ekuverenga mabhuku panharembozha yako uye kunakirwa nenguva dzinonetesa dzekufunda kana kunakidzwa.